Oganda, Tany Iray Amin’ireo Fialokalofana Tena Tsara Fandray Indrindra Eran’izao Tontolo Izao. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2016 19:00 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Ελληνικά, Español, عربي, 日本語, Français
Ireo bilaogera Ogandey nandritra ny FABY – Dakar (nahazoana alalana tamin'ny FABY)
Toa ho sarotra kokoa ho an'ireo solontena 6000 avy amin'ireo firenena 135, izay nandray anjara tamin'ny fihaonana an-tampony momba ny maha-olombelona, natao tao Istambul, Gresy ny 23 sy 24 may lasa teo, ny handeha hihoatra nylisitra iray misy ireo fikasàna tsara. Nefa, io fihaonambe io no hahafahana mampahatsiahy hoe zavadehibe ny ataon'ireo firenena sasany. Nefa ireo haino aman-jery iraisam-pirenena dia zara raha manasongadina izany, eo amin'ny lafiny fandraisana sy fampidirana ireo mpifindramonina. Amin'ireo rehetra voalaza ireo, i Oganda no anisany iray amin'ireo firenena malaza indrindra nandritra ilay fihaonambe noho ny politikany mikasika ny fandraisana ireo mpialokaloka.
Nandritra ny fivoriana fanomanana isam-paritra mikasika ny fihaonambe an-tampony momba ny maha-olona, izay natao tao Kampala, nanome toromarika ho an'ireo mpandray anjara ny Praiminisitra Ougande Apolo Nsibambi hoe
Tsy azo leferina ny hoe i Afrika izay firenena afaka tamin'ireo hery matanjaka eoropeana mpanjanaka mandritra ny 50 taona no mitohy ho ny tena mpamokatra mpialokaloka sy fifindràmonina anatiny be indrindra. “Mametraka loza mitatao amin'ny fampandrosoana an'i Afrika ny tsy fahafahana miaro sy miatrika tsara ary koa mitondra ireo vahaolana amin'ny fotoana ilaina azy amin'ireo olana niteraka ireny trangana fifandràmonina ireny… ary misy voka-dratsiny henjana eo amin'ny filaminana sy ny fahamarinan-toerana
Raha nilaza ireo teny ireo izy, fantany tsara izay nambarany satria ny fireneny, mandray mpialokaloka 700 000, izay manana mpifanila vodirindrina isian'ny tebka fiaingàn'ny tsy fahamarinan-toerana sy ny ady, ahitana ireo mponina avy ao Sodàna atsimo, ireo somaliana, Roandey, Borondey ary ireo Kongoley.
Na eo aza ny isa maroben'ireo mpialokaloka, ankatoavin'ireo mpiara-dia aminy ny politikan'i Ogandà momba ireo mpialokaloka. Ny tobin'i Nakivale, noforonina tamin'ny taona 1958 mba handraisana ireo tutsis nandositra ny revolisiona hutu teo amin'ny fireneny, dia hita any amin'ny 6 ora miala an'i Kampala, renivohitr'i Oganda. Mivelatra eo amin'ny faritra mirefy maherin'ny 184 km² izy, misy farihy, havoana, renirano maro sy ireo saha lonaka, izy araka ny lazain'ny tambajotra caritasgoma.org amintsika hoe:
“Tena azo ambara ho tokana ny modely omen'i Oganda momba izay omeny ho an'ireo mpialokaloka.” Araka ny voalazan'ireo mpanaramaso, ny fandraisany andraikitra avy hatrany amin'ireo mpialokaloka sy ny fanampiana entiny ho azy ireo no maha-tokana an'i Oganda,. “Ao Oganda, afaka mandray anjara amin'ny toekarena eo an-toerana ireo mpialokaloka”, hoy ny fanamafisan'ny mpitondra teny iray avy ao amin'ny HCR.
Nitsidika io toby io ny mpikaroka iray, M. Will Jones, avy ao amin'ny Ivontoerana Fandalinana momba ireo mpialokaloka avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Oxford, telo taona lasa izay. Nofaritany toy izao izany teo amin'ny tambajotra fmreview.org :
Tsy ghetto hipoka olona aseho amin'ny ankapobeny any anatin'ireo media akory io. Nakivale dia fikambanana tanàna maromaro mahavelona ny tenany vokatr'ireo asa fambolena sy fiompiana ataony, izay mamokatra ihany koa ambimbava aondrana mihoatra ny faritra misy azy. Na any ankebakeban-tany any aza ny tobin'i Nakivale, tsy misy tranganà hetsika kolontsaina, sosialy ary ekonomika miavaka: hita ao ireo tsena, sarimihetsika marobe ary ireo finday avo lenta maro, izay manambara fa mahazo tombontsoa amin'ilay tilikambo avon'ny finday naorina ao afovoan'ny toby ny mponina.
Tao anatin'ny lahatsoratra tamin'ny 9 février 2016, nampatsiahy ihany koa Ramatoa Alice Albright, tale jeneralin'ny Fiarahamiasa Erantany ho an'ny Fanabeazana, fa nampiditra mihintsy ny momba ireo mpitsoa-ponenana ho ao anaty drafitra fampandrosoany i Oganda:
Na dia eo aza ireo fahasoratana ireo, fantatry ny governemanta Ogande fa kely raha oharina amin'ny tsy fihetsehana ny sandan'ny fiarovana sy ny fanampiana an'ireo mpialokaloka 250 izay tonga isanandro ao amin'ny firenena.
Tonga saina amin'ny hoe olana ho an'ny fampandrosoana maharitra ny fifindran-toeran'ireo mponina, nampidirin'ny firenena tao anaty Drafitra Fampandrosoana ny Firenena ny olana mikasika ireo mpialokaloka. Iandraiketan'ny Minisiteran'ny Fanabeazana ireo sekoly any amiin'ny tobin'ireo mpialokaloka.
Tao anaty lahatsoratra iray navoaka vao haingana tao amin'ny tambajotra cairn.info, nitondra ny lohateny hoe Territoire et dimension géopolitique de l’accueil des réfugiés-Les colonies agricoles des exilés du Soudan en Ouganda (Faritany sy ny toerana ara-jeopolitikan'ny fandraisana ireo mpialokaloka-Ireo vondrom-piarahamnonin'ny mpifindramonina miaina any ambanivohitr'i Sodàna sy Ogandà) – nanamarina ny Profesora Luc Cambrézy, mpahay jeografia, talen'ny fikarohana ao amin'ny Ivontoerana Fikarohana momba ny fampandrosoana (IRD) fa:
Mifanohitra tanteraka amin'ny sary mahazatra izay hamongorana ny fiverzivezen'ny mpialokaloka amin'ny fampivondronana ireto farany any anatinà toby, nisafidy ny hanokatra vodnrom-piarahamonina ambanivohitra ho an'ireo niharan'ny ady an-trano tao Sodàna ny governemanta Ogande. Taorian'ny fanadihadiana mikasika io andrana io tany amin'ireo faritra roa lehibe fandraisana (Toby Rhino sy ny distrikan'i Adjumani), hita fa ny fandaminana sy ny fampandrosoana ny faritra miaraka amin'ny fanohanana sy ireo fomba fanampiana araka ny maha-olona iraisam-pirenena no tanjona voalohany indrindra ho an'ny governemanta .
Ao anaty lahatsoratra tamin'ny Jona 2014, mandalina fanadihadiana iray ny tambajotra irinnews.org izay notarihan'ny Prof Alexander Betts, talen”ny Ivontoeram-pianarana momba ireo mpialokaloka avy ao amin'ny anjerimanontolon'i Oxford sy ny tariny [ahitàna an'i M. Will Jones mpikaroka voalaza etsy ambony] mahakasika ny fomba fiveloman'ireo mpialokaloka, afaka vakiana ny hoe:
Noho izany, inona ary no ataon'ireo mpialokalaka mba hivelomany? Mamboly izy ireo, marina mihintsy, ary tsy ny amin'ireo toerana any ambanivohitra ihany. Efa ho antsasak'ireo mpialokaloka Kongoley, Roandey ary Sodaney atsimo, nanontanian'ireo mpikaroka no mamboly ireo faritra kely ananany. Ireo hafa mpikarama amin'ny asa fambolena. Ireo Somaliana irery no tsy dia liana loatra, na tsy misy mihintsy aza, amin'ny fambolena.
Tsy ny fambolena ho fivelomana irery ihany akory
Manatitra tsy tapaka ireo vokatra novidiany ireo Ogandey ho any amin'ireo toerana fametrahana azy ary miverina miaraka amin'ireo fiarabe feno vokatr'i Kyangwali, mankany amin'ny tsenan'ny tanànan'i Hoima. Nanontany mpivarotra iray tao Hoima ireo mpikaroka, izay nilaza fa katsaka efa ho 500 taonina sy tsaramaso no novidiany tamin'ireo mpialokaloka tamin'ny taona lasa, izay heverina ho ny 60% n'ny tahiriny. Namidiny tamin'ireo faritra hafa tao Ogandà ny katsaka, any ivelan'ny firenena ihany koa; ao Tanzania sy ao Sodàna atsimo.
Ankehitriny, mikasa ny hanafoana ireo mpanelanelana ireo mpamokatra ao Kyangwali amin'ny alalan'ny famarotana mivantana eny an-tsena ireo vokatra vokariny, amin'ny alalan'ny fampiasana kaoperativa iray misy mpikambana maherin'ny 500 izay misy ireo Ougandey mpamboly ao amin'ireo faritra eo an-toerana. Fiarahamonina iray manana petra-bola ny Fikambanan'ireo mpamboly mivoatra an'i Kyangwali (Kyangwali Progressive Farmers), izay ankehitriny manao rangopohy ireo fifanarahana mba hivarotana mivantana ireo vokatra amin'ireo orinasa mpanodina.
Tao amin'ny tanànan'i Rwamwanja, fandaharan'asa iray mikasika ny fitehirizana sy findramam-bola, antsoina hoe Solo Effort, no napetraka mba hanampy ireo mpialokaloka sy ireo olom-pirenena hanao fiompiana na hanangana karazana orinasa hafa. Misy mpikambana 139 izy io, nitsangana efa ho roa taona izao. Ao anatin’ity lahatsary ity, Ramatoa Rebecca, iray amin'ireo mpikambana no manazava ny fomba naha-tafavoaka azy tao anaty fahantrana vokatr'io fandaharan'asa io.
Na izany aza, tsy foana akory ireo fahasarotana mikasika ny fampiharana io politika fandraisana sy fampidirana ireo mpialokaloka io. Ho ohatra amin'izany, ny tambajotra caritasgoma.org, efa notanisaina, dia mampatsiahy fa:
Fa miorina akaiky an'ireo tanàna ogandey ny toby Nakivale izay ampiharan'ireo tantsaha ny voly fototra. Raha mijery ny governemanta izay manala aminy ny tanin'izy ireo mba hametrahana ireo mpialokaloka, tsy faly iretsy voalohany amin'ny fanampiana iretsy faharoa. Noho izany, mametraka ahiahy kely ireo mpialokaloka.
Manohana hevitra ny governemanta fa efa nomanina ho an'ireo mpangataka fialokafolana ireo tany ireo. Ao anaty firenena iray izay firenena iray amin'ireo manana mponina tanora sy mavitrika indrindra eto amin'izao tontolo izao, ny fahazoana tany no fanamby izay tsy maintsy atrehan'ireo politika momba ny mpialokaloka ao Ougandà. Saingy hatreto aloha, ny governemanta sy ireo mponina eo an-toerana dia tapa-kevitra hikarakara ireo izay mila fanampiana sy manao izany amin'ny fomba tsara indrindra azo atao.
Raha tiana ny hampiharana hatrany io politika io, dia etsy ankilany, tsy maintsy atsofok'ireo tompon'andraikitra ho ao anatin'ny fandaharanasa napetraka ho an'ireo mpialokaloka ireo mponina teratany manamorona ireo toby ireo, fa etsy andaniny, mba hazavaina antsakany sy andavany amin'izy ireo tsara ireo politika ireo mba hisorohana ireo hevi-diso, matetika mpiteraka ireo fifandirana.